जीवन धेरै विडम्बनापूर्ण छ। यो खुशी भनेको के हो भनेर जान्न उदासिनता, शान्तिको मूल्यांकन गर्न शोर, र मूल्य उपस्थितिमा अनुपस्थिति जान्छ। - बेनामी - उद्धरण प्याडिया
जीवन विडंबनापूर्ण छ र यो सत्य हो। हामीले केही चीजहरूको मूल्य बुझ्दैनौं जब सम्म हामी यो गुमाउँदैनौं। हो, चारै तिर हेर्दै, तपाईले अहिल्यै यो महसुस गर्न सक्नुहुन्न, तर रेखा मुनि, तपाई पक्का हुनुहुन्छ कि यी शब्दहरूको वास्तविक अर्थ.
हामी यसको स्वामित्व नभएसम्म हामी कुनै चीजको कदर गर्दैनौं। हामी ती चीजहरूलाई ग्रहण गर्नका लागि लिन्छौं र सायद उनीहरूलाई एक हेराइ राख्न मूल्य छ र तिनीहरूको मानको कदर गर्दछौं। यो हाम्रो मनोविज्ञान काम गर्न को झुकाव हो कसरी!
हामीले ती चीजहरूमा ध्यान दिन थाल्छौं जब हामी त्यसलाई हराउँछौं। ठीक भनिन्छ कि खुशी भनेको के हो भनेर जान्न दु: ख लाग्छ!
तपाईलाई खुशीको बारेमा कहिले पनि थाहा हुँदैन, र तपाईले महसुस पनि गर्नुहुन्न कि तपाई खुशी हुनुहुन्छ जब सम्म तपाई आफ्नो जीवनमा दु: ख र कष्टहरू देख्नुहुन्न।
तपाईंले केही नराम्रो दिनहरू अनुभव गर्नुपर्दछ कि तपाईंले यो सबै बखत खुशी र राम्रो जीवन बिताइरहनुभएको छ भन्ने महसुस गर्न।
नतिजा स्वरूप, तपाईं तपाईंको मौनको मूल्यलाई मात्र बुझ्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं आफू वरपर धेरै हल्ला सुन्नुहुन्छ।
अर्को तरीकाले, यो लेख्न सकिन्छ किनकि तपाईले कहिले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न कि कसरी शान्त र शान्त वातावरणले तपाईंलाई भित्री जस्तो महसुस गराउनेछ र जब सम्म तपाईं आफ्नो वरिपरिको वरिपरि गडबड हुनुहुन्न।
साथै, तपाई आफू वरपर कसैको उपस्थितिको महत्त्व बुझ्न सक्नुहुनेछ जब व्यक्ति लामो समय सम्म रहदैन।
यो एक व्यक्तिको अनुपस्थिति हो जसले तपाईंलाई उसको उपस्थिति महसुस गराउँदछ। जब कोही तपाईं जहिले पनि वरिपरि हुन्छ, हामी प्रायः व्यक्तिलाई सम्मानका साथ लिन्छौं।
केवल उदाहरणका लागि, हामीसँग हाम्रो आमा सँधै त्यहाँ रहनुहुन्छ, सबै घरका कामहरू गर्दै, र यसैले हामी उनको उपस्थिति महसुस गर्दैनौं जब सम्म उहाँ अरु कतै जानुहुन्न।
त्यस्तै प्रकारले हामी कुनै चीजको मूल्यको मूल्या appreciate्कन गर्दैनौं जबसम्म हामी तिनीहरूको स्वामित्वमा रहन्छौं। हामी केवल तब मूल्य जान्न सक्दछौं जब त्यो व्यक्ति त्यहाँ हुँदैन।
तसर्थ, तपाइँ जहिले पनी यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाइँ चीजहरू मूल्यवान् गर्न सिक्नुहोस् उनीहरू तपाईंको जीवनमा उपस्थित नभएसम्म, किनकि यसले उनीहरूलाई मोल गर्नमा कुनै अर्थ राख्दैन एक पटक तिनीहरू गए पछि।
गजबका बिहिबार उद्धरणहरू
मौन उद्धरणमा रोइरहेकी
खुशी र उदासी उद्धरण
मौन बसिरहेको बारेमा उद्धरण
दुखद मौन उद्धरण
दु: ख उद्धरण
दु: ख कोट छविहरू
जीवनको बारेमा ज्ञानको उद्धरण
तपाईं जहाँ जानुहुन्छ प्रेम र दयाको पदचिन्हहरू छोड्नुहोस्। - बेनामी
तपाईं जहाँ जानुहुन्छ तपाईंले प्रेम र दयाको पदचिह्नहरू छोड्नु पर्छ। यो बुझ्नु आवश्यक छ कि ...
पछाडि फर्केर रोक्नुहोस्। त्यहाँ केहि छैन। तपाईको उपचार, आशिष, र चमत्कार तपाईको अगाडी हो, तपाईको पछाडि होइन। - बेनामी
पछाडि फर्केर रोक्नुहोस्। त्यहाँ केहि छैन। तपाईंको उपचार, आशीर्वाद, र चमत्कार तपाईं भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, पछाडि होइन ...
तुलना नगर्नुहोस्, केवल सिर्जना गर्नुहोस्। - बेनामी
सबै मानव संवैधानिक रूपमा एक समान तर प्रतिभाहरूमा अद्वितीय छन्। हामी सबैलाई केही न केही उपहारहरू दिइएका छन्।
सँधै साथीहरूलाई मनदेखि माया गर्नुहोस् तपाईको मुड वा आवश्यकताबाट होईन। - बेनामी
साथी भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जससँग हामीसँग रक्त सम्बन्ध हुँदैन, तर बन्धन आपसीमा आधारित छ ...
कहिलेकाँही तपाईंले सत्य स्वीकार्नुपर्दछ र गलत व्यक्तिहरूमा समय खेर फाल्नु पर्छ। - बेनामी
कहिलेकाँही, तपाईंले सत्य स्वीकार्नुपर्नेछ र गलत व्यक्तिहरूमा समय खेर फाल्नु आवश्यक पर्दछ। हो, यो ...